माता दक्षिणकालीको महिमा पढेर दर्शन स्वरूप , एक लाइक र शेयर गरौ !
दक्षिणकाली भगवती दक्षिणकाली मन्दिर राजधानी काठमाडौंबाट दक्षिण भेगमा करिब १७ किमिको दुरीमा रहेको छ। यो कालीदेवीको मन्दिर हो। यो मन्दिर राजा प्रताप मल्लद्वारा निर्माण गरिएको हो। यो फर्पिङको मुटुस्थित ऐतिहासिक महत्त्वले भरिपूर्ण मन्दिर हो। चारैतिर हरियालीले सजिएको यो मन्दिर दुई नदीको दोभानमा छ। यो मन्दिरमा कालीको मूर्तिबोहक अन्य देवी देवताको
हे भगवान यो के गरिस, विवाहको ४ दिन अगाडी नै सबैलाई छो’डेर गईन् रमिता !
बिवाहा आउँन मात्र चार दिन बाकी थियो । आफुले रोजेको मान्छे संग बिवाहा हुने भए पछी उनको मनमा खुसीको कुनै सिमा थिएँन । मन फुरुंग थियो । तर दैबको लिला उनले त्यो खुसीको पल अनुभब नै गर्न पाइनन । यहि १३ मा हुने आफ्नो विवाहको निम्ता साथिहरुलाई बाँडन हिड्दै थिईन
शुक्रबार विहान छ बजे नै पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड निवास खुमलटारमा सय जनाको समूह पुग्यो । ल’डाकु जस्ता देखिने युवाहरु बालबच्चा र परिवारसहित पुगेपछि प्रचण्डको सु’रक्षादस्ता नै अलमलमा पर्यो । उनीहरु ढोकामा पुगी प्रचण्डलाई भेट्न आएको जानकारी गराए । तर, सुरक्षाकर्मीले भित्र छिर्न दिएन । प्रचण्डनिवासको मूलढोकामा एक घन्टासम्म युवाहरु घेरेर
बिचरा ! १७ बर्षीय युवतीले बिबाह नगरी बच्चा जन्माईन , प्रेमीले बच्चा नअपनाए पछि रुँदै मिडियामा (भिडियो सहित)
मोरंगमा एक अचम्मको घटना घटेको छ । एक १७ बर्षिय युवतीले बिबाह नगरी बच्चा जन्माएपछि गाउमा सबै चकित बह्येका छन् । उनका अनुसार बेलबारीमा बसोबास गर्दै आएका १९ बर्षिय युवा निशान धिमाल संग प्रेममा थिइन । उनीहरु बीच गहिरो प्रेम सम्बन्ध थियो । उनीहरु संगै २/३ दिन सम्म एकै घरमा
२०२० मा यी राशिलाई फाइदै–फाइदा, न पैसाको समस्या न घरमा अशान्ति ! जानी राखौ
सन् २०२० को अंक ४ हो । यो अंक राहूको भएका कारण यसले पूरै वर्षलाई नै प्रभावित गर्नेछ । वर्षको शुरुवात कन्या लगनबाट हुनेछ त्यसकारण पनि वर्षको परणमा मिश्रित हुनेछ । वर्षको शुरुवातमा चन्द्रमा कुम्भ राशिमा हुनेछ भने शनिको प्रभाव पनि प्रभाव मजबुत हुनेछ ।२०२० मा शनिबार र राहुप्रधान मानिसहरुलाई
मेष राशि – चु, चे, चो, ला, लि, लु, ले, लो, अ – परीश्रम अनुरुपको फल प्राप्ती हुने समय रहेकोछ । सामाजीक कार्यका क्षेत्रमा सहभागीता जनाउने अवसर प्राप्त रहनेछ । सभासम्मेलन जन्य कार्यका क्षेत्रमा मान सम्मान प्राप्तीको योग रहेकोछ । मनोरञ्जनका क्षेत्रमा समय ब्यतित रहेनछ । पारीवारिक झोर झमेलाको सामना
रबि लामिछानेलाई फसाउन प्रहरी देखि पत्रकार सम्म लागि परेका थिए , वकिलले भित्री रहस्य !
सञ्चारकर्मीद्वय रवि लामिछाने र युवराज कँडेललाई जिल्ला अदालत चितवनले सफाई दिएको छ । जिल्ला अदालत चितवनमा भएको बहस सकिएपछि फैसला सुनाउँदै जिल्ला अदालतका न्यायाधीश हेमन्त रावलको इजलासले लामिछाने र कँडेललाई सफाई दिएको हो ।सोहि क्रममा रबिका पक्षबाट बोल्ने वकिल सुनिल पोख्रेलले पनि यो केशको बारेमा खुलासा गरेका छन। प्रहरी देखि